Create Music on Only Laptop - MYSTERY ZILLION
Create Music on Only Laptop
July 2009 edited August 2009 in Laptops & Notebooks Sale
:106:ကျွန်တော်ကဗျာ Laptop တစ်လုံးတည်းနဲ. Music ဖန်တီးချင်တာ-။
အဲဒါ-- ရသလား-?/ မရဘူးလား-?
အခုကျွန်တော်က Laptop တစ်လုံး၀ယ်ဖို.စဉ်းစားနေတာ။
တတ်နိုင်တာက ၆၀၀,၀၀၀ လောက်ပါ။ အဲဒီတော့-သုံးရမယ့် Sofeware နဲ. Sound Card တွေရဲ.အမျိုးအစား ၊ တန်ဖိုး စတာတွေကိုတွေကိုပြောပြပေးကြပါဦး---။
ဒီပြဿနာရဲ. အရင်းအမြစ်ကတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စပ်ထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းလေးတွေပါပဲ-။
ကျွန်တော်က လုံး၀ Professional ကျကျကြီးဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူး-။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်ချင်တယ်၊ သူများ (အဆိုတော်) တွေကို Demo ပြကြည့်ချင်တယ်-။
ကိုယ်နဲ.ရင်းနှီးတဲ့ Studio တစ်ခုတော့ရှိပါရဲ.-။ ကိုယ်ထက်အရေးကြီးတဲ့သူတွေချည့်ပဲဆိုတော့---။
သိတဲ့သူများရှိရင် ကျေးဇူးပြုပြီး ဒုက္ခခံပေးကြပါဦး-။
စာကျန် Laptop ထဲကလည်း အမျိုးအစားသင့်တာလေးလမ်းညွှန်ပေးကြပါဦး-။:106:
Laptop တစ်လုံးထဲနဲ့ Music ကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်။
ဘယ်အတိုင်းအတာ အထိရလဲဆိုတော့၊ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ အကုန်ခံနိူင်လဲပေါ်မူတည်ပါတယ်။
၆၀၀၀၀၀ လောက်ဆိုရင်တော့မရနိူင်ပါဘူး၊ ၈၀၀၀၀၀ လောက်ဆိုရင်မဆိုးဘူးဗျ၊ ဒါတောင် Acer လောက်ပဲရမှာ၊ သူက Free Doc ဆိုတော့ နဲနဲ သက်သာတာ။
၆၀၀၀၀၀ လောက်ဆိုရင် Desktop ဝယ်ပါလားဗျ၊ ရှယ်ပဲ။
ရှယ်ဆိုပေမယ့် Core2duo လောက်ပဲရမှာ။
သူနဲ့လိုက်ဖက်မယ့် MB တို့ VGA တို့ Sound Card တို့ ကဝယ်ရအုံးမှာလေ။
သာမန်ဆို Sound Card မလိုဘူးပေါ့နော်၊ Music ပိုင်းလုပ်မှာဆိုတော့ Sound Card ရှယ်ဝယ်ရမှာလေ၊ ပြီးတော့ Sound Card ကောင်းတိုင်းလဲမရသေးဘူးဗျ၊ Speaker ကောင်းမှလဲ အသံထွက်က ကောင်းမှာဆိုတော့လေ။
အခုအနေအထားအရ ၆၀၀၀၀၀ လောက်အကုန်ခံနိူင်ရင် Quad Core လောက်ရနိူင်ပေမယ့် Sound ပိုင်းအတွက် ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ Core2duo ဖြင့် Desktop တစ်လုံးသာဆင်စေလိုပါကြောင်း။
kokobobo wrote: »
Core Duo လောက်ဆိုရင်ကိုရပါတယ် အဓိကက processing power နဲ့ hard space ပဲ။ CPU 2.0 လောက်ရှိပြီး 250GB လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါပြီ။ HDD size ကဒါ့ထက်ပိုများရင်ကောင်းတာပေါ့။ Graphic card ကောင်းဖို့မလိုပါဘူး။ sound card တွေကတော့ နောက်ပိုင်း HD နဲ့ပဲလာတယ်။ Professional သုံးတဲ့ sound device မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ USB နဲ့လာတဲ့ Professional sound device ရှိရင် နောက်မှသတ်သတ် ဝယ်သုံးပေါ့။ HP, Compaq က DELL ထက်စာရင်သက်သာတယ်။ 850000 လောက်ရှိမယ်။ ACER ကပိုသက်သာတယ်။ ACER ထက်သက်သာတာက Suzuki ကထုတ်တဲ့ လက်တော့ပဲ Core2Duo T6400ယ Memory 2GB(မသေချာပါ) ပါတာတောင်မှ 500000 လောက်ပဲရှိတယ် အမျိုးမျိုးပဲ ကိုယ်တိုင်အဆင်ပြေသလိုရွေးပါ။:67:
အခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့ ကိုယောင်စိန် နဲ.ကို Challenger220 တို.ကို အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နောက် လိုအပ်တာတွေရှိရင်လဲ အကူအညီထပ်တောင်းပါဦးမယ်--။